SingForYou.net - Ko Chit
Tags : recorded by ma moe....Sithunaung & Thanzinchitthu
By : thanzinchitthu on May 29, 2010
Score: 120 Rating: 5.00 Comments: 19
Ko Chit's Description
ဒီသီချင်းလေးကိုတော့ bro စည်သူနောင်နဲ့အတူအမှတ်တရသီဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်... ကူညီသီဆိုပေးတဲ့broစည်သူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်... မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းလို့ကောင်းနေတဲ့ကြားကအကူအညီတောင်းတာကိုနှိပ်စက်တယ်လို့သဘောမထားပဲစေတနာထားပြီး စ်ိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ record လုပ်ပေးတဲ့ မမ forevermoe ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်..:P>> အားပေးနားဆင်ကြတဲ့ညီအကို မောင်နှမများအားလုံးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ..."သံစဉ်ချစ်သူ"
hippo on Jun 1, 2010 0
wow ... great ... *****
susu23 on Jun 1, 2010 0
bro sithu &thanzin2y0ut lone xo thwar kya tar shal par bel arr pay thwar par tel shin*************4u2.....:)))))))))
soramoe on Jun 1, 2010 0
OMG kg lite tae' idea and vocal tway ... mixed down ka laeamite sar bae'
sithunaung on May 31, 2010 0
~ဒီသီချင်းကိုဒို့ညီအကိုနှစ်ရောက်အတူတူအမှတ်တရဆိုရအောင်လို့ ပြောပြီးဖိတ်ခေါ်လာတဲ့ဘရိုသံစဉ်ကိုကျေးဇူးပါ နောက်ပြီးခရီးရောက်မဆိုက်နေ့ညတွေမှားလိုအိပ်ရေးပျက်နေတဲ့ကြားက နေကူညီ Record ပေးတဲ့မိုး(forevermoe)ကိုကျေးဇူးအထူးပါ, အားပေးနားဆင်ကြတဲ့အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်း များကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ~:)))
turikimuriki on May 31, 2010 0
wow.. great one .. love it *****
kounghtetsan on May 31, 2010 0
ညီလေးရေ.. ဂွတ်တယ်ဝေး။။ အဆိုကောင်းတယ်ကွာ.. အားပေးသွားပါတယ်. ညီရေ.. 5****** ခင်မင်လျှက်. ကောင်းထက်
chitmoe2009 on May 31, 2010 0
very nice to listen******************5* for both of u.......
paradise on May 31, 2010 0
ဪ မမိုးခမျာ အမောလေးဘာလေး ပြေပါစေအုံး ညီအစ်ကို နှစ်ယောက် ဝိုင်း နှိပ်စက်ကျတယ်ပေါ့ ဟီး :D~~ ဆိုထားကြတာကလဲကောင်းလိုက်ကြတာနော် Record ပေးတဲ့သူကလဲတော်ဆိုတော့ တစ်ပုဒ်လုံးက ဘာမှပြောစရာကိုမလိုလောက်အောင်ပါပဲ!!
Ilovemusic on May 31, 2010 0
very nice2listen par....bro toe yay....really great singing...5* for both of you .......
yinmin on May 31, 2010 0
whitekisslay on May 31, 2010 0
wow.....very nice &great duet par palzz bro g sithu&ko thanzin yaytt....*********************million starss for both of u:clap:clap:clap>>>>>>>>
snowgirl on May 31, 2010 0
;clap; ;clap; bro2yaut lone sing thwar darayan ko kg dar pal, cha noe gal lay arr pay thwar par dal shin. song yaw voice tway yaw perfect par pal shin :) very good par pal shin *******
ayoelay on May 31, 2010 0
လိုက်ဖက်ညီညီ နားထောင်လို့အကောင်းဆုံးပါပဲ... Great ***** form me :))
avatar on May 31, 2010 0
အားပေးသွားပါတယ် သူငယ်ချင်းရေ အရမ်းကောင်း၏5*4u
aprilsea4 on May 29, 2010 0
yayy...yayy..like ds song..arr pay twr tal..bro myar....cool..n coo..l2listen it..*****
လန်းတယ်ဗျာ... ဆိုထားတာ ၂ ယောက်လုံး ပြောစရာမရှိအောင်ကို ကောင်းတယ်....
wow... xo xo special !!!! great performance of u3 .... here is my respectful million starz for u all (my two broz,,,, C2 &MARLAKARTEE n my sis recorder MAR MOH MOH )......bravoooooooooo :clap :clap :clap .....:atb ..>>>>>>> :P >>>>>
lain on May 29, 2010 0
pusuu on May 29, 2010 0